कमैंया महिलाहरुका लागि च्याउ खेती बरदान(भिडियो)
Published: January 19, 2016 14:02 PM
बर्दिया, माघ ५ । बर्दियाका मुक्त कमैया महिलाले मेहनत गरे स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । सरकारबाट घरवासका लागि थोरै जमिन पाएका मुक्त कमैयाले सामूहिक च्याउखेती गरी आयआर्जनमा आफूहरुलाई अब्बल सावित गरेका हुन् । दाता, सहकारी संस्था र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सहयोग पाएपछि थोरै जमिनबाटै...
मुस्ताङ भ्रमण गर्नेमा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक
Published: January 19, 2016 09:13 AM
मुस्ताङ, माघ ५ । पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ भ्रमण गर्नेमा भारतीय नागरिक बढि रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर मुक्तिनाथ, कागबेनी र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले जनाएको छ । ‘मुक्तिनाथ दर्शन र कागबेनीमा...
निगमले थुपार्‍यो सवा दुई करोड लिटर तेल
Published: January 19, 2016 07:37 AM
काठमाडौं, माघ ५ । नाकाबन्दी अघिभन्दा बढी मौज्दात–भारतीय नाकाबन्दीअघि (भदौ मसान्तमा) नेपाल आयल निगमको देशभर रहेका डिपोमा करिब एक करोड ९० लाख लिटर (१९ हजार किलोलिटर) इन्धन थियो । देशभरका नौ डिपोमा अहिले दुई करोड १८ लाख २६ हजार लिटर इन्धन मौज्दात छ । डिजेल एक करोड ३४ लाख ९९ हजार लिटर र...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, यस्तो छ हालको मूल्य
Published: January 19, 2016 11:33 AM
काठमाडौं, माघ ५ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । प्रत्येक दुई सातामा मूल्य समायोजन गर्ने गरी स्वचालित प्रणाली लागू गरे पनि निगमले साढे ४ महिनापछि पहिलो पटक इन्धनको मूल्य घटाएको हो । सोमबार साँझ बसेको निगमको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा ६/६ रुपैयाँ घटाएको हो । ...
मधेस आन्दोलनले मूल्यबृद्धि उच्च, अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर
Published: January 19, 2016 08:09 AM
काठमाडौं, माघ ४ । तराई–मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीति उच्चदरले बढ्दै गएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँचौ महिनाको आर्थिक स्थितिमा २०७२ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दूगत् उपभोक्ता मुद्रास्फीति ११.६ प्रतिशत पुगेको जनाइएको हो ।अघिल्लो वर्षको यसै महिनामा यस्तो...
चौधरी फाउन्डेसनद्वारा भूकम्प प्रभावितका लागि १७ सय घर र ३० ओटा विद्यालय निर्माण
Published: January 18, 2016 19:41 PM
काठमाडौं, माघ ४ । चौधरी फाउन्डेसनले भूकम्प प्रभावितका लागि हालसम्म १७ सय संक्रमणकालीन घर र ३० ओटा विद्यालय भवन निर्माण पूरा गरेको छ ।फाउन्डेसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ७ महिनाको अवधिमा १ हजार सिजी आश्रम र १२ ओटा विद्यालय भवन औपचारिक कार्यक्रम नै गरी हस्तान्तरण भैसकेको जानकारी गराएको हो ।फाउन्डेसनले गत वैशाख २३ गते पत्रकार...
अनुज्ञापत्र नलिइ सन्चालित उत्पादनस्थलमा सिलबन्दी
Published: January 18, 2016 19:40 PM
काठमाडौं, माघ ४ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको निरीक्षण टोलीले नाङ्लो बेकरी प्रालि, ठैबको शाखाकोरुपमा सानेपास्थित केक पेस्ट्री उत्पादन गर्ने कारखानामा सिलबन्दी गरेको छ ।नाङ्लो बेकरी प्रालि ठैबले अनुज्ञापत्र लिएको तर खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ३० अनुसार छुट्टै उत्पादन स्थानलेसमेत अनिवार्य अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था...
यसरी घटाइँदै छ लोडसेडिङ, आगामी वर्ष ५ घन्टामा सीमित ! (भिडियोसहित)
Published: January 18, 2016 19:31 PM
काठमाडौं, माघ ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ झट्ट सुन्दा विश्वास लाग्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै एक वर्षभित्रै मुलुक लोडसेडिङमुक्त नभएपनि आगामी वर्ष लोडसेडिङ सातामा बढीमा ५ घन्टामा सीमित हुन सक्ने र केही वर्षमै पूर्णतः लोडसेडिङमुक्त हुनसक्ने...
Published: January 18, 2016 19:43 PM
काठमाडौं, माघ ४ । सोमबार पनि शेयर बजार सामान्य अंकले सकारात्मक रह्यो ।उतार–चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से २ अंक बढीले धनात्मक रहेर १२ सय १४ दशमलब तीन एक कायम भएर थामियो ।कारोबार सुरु भएदेखि उच्च दरले उकालो लागेर १२ सय २४ पुगिसकेको नेप्से पछि सुस्ताएको हो । कारोबार भएकामध्ये आधाभन्दा बढी समूह हरियो रहेसँगै नेप्से धनात्मक...
नाट्टामा नयाँ नेतृत्व, मधुसुदन आचार्य नेतृत्वको टिम विजयी
Published: January 18, 2016 10:23 AM
काठमाडौं, माघ ४ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी (नाट्टा)को निर्वाचनमा मधुसुदन आचार्य नेतृत्वको समूह विजयी भएको छ । नाट्टाको ५२ औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनमा आचार्यको समूह अत्यधिकत मत ल्याई विजयी भएको हो । गएराति सम्पन्न मतगणनाको परिणाम अनुसार आचार्यले १९१ मत प्राप्त गरे । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी...
आन्दोलनकै क्रममा वीरगन्जमा लक्ष्यभन्दा १९ प्रतिशत बढी राजश्व
Published: January 18, 2016 14:06 PM
वीरगन्ज, माघ ४ । वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले गत पुस महिनामा लक्ष्यभन्दा १९ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको छ । मधेस आन्दोलनका कारण मुलुकका प्रमुख भन्सार कार्यालयहरुमा राजश्व संकलन कम भइरहे पनि वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा आयात बढेपछि राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको हो । सुख्खा...
आइतबार १०० ट्यांकर इन्धन भित्रियो
Published: January 18, 2016 08:11 AM
काठमाडौं, माघ ३ । आइतबार दिनभरमा विभिन्न नाका हुँदै १०० ट्यांकर इन्धन नेपाल भित्रिएको छ । यस अतिरिक्त ती नाकाबाट मालवाहक सवारी साधन पनि भित्रिएका छन् । आज काँकडभिट्टा–पानीट्याङ्की नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकका ३५ वटा मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिए । यस्तै विराटनगर–जोगबनी...
तराई आन्दोलनले मासिक एक अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल उठेन
Published: January 17, 2016 19:23 PM
काठमाडौं, माघ ३ । तराईमा जारी आन्दोलनका कारण मासिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल उठ्न नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । तराई क्षेत्रमै बढी विद्युत चुहावट हुँदै आएको अवस्थामा विद्युत महसुल पनि नउठ्दा त्यसको मार प्राधिकरणलाई परेको प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले बताए । ...
शेयर बजार बुलिस ट्रेण्डमा, नेप्सेमा पुनः नयाँ रेकर्ड
Published: January 17, 2016 19:13 PM
काठमाडौं, माघ ३ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको संकेतसँगै आइतबार शेयर बजारले बुलिस ट्रेण्ड लियो । कारोबार शुरु भएदेखि उकालो लागेर नेप्से पुनः नयाँ उचाईमा पुग्यो । नेप्से २२ अंक बराबरले उकालो लागेर १२१२ पुग्यो । यो हालसम्मकै सर्वाधिक उचाई हो । यसअघि संविधान जारी भएसँगै बजार उच्च दरले उकालो लागि गत असोज ५ गते १२०५ मा...
आलुमा रोगको प्रकोप, किसान चिन्तित
Published: January 17, 2016 16:49 PM
बारा, माघ ३ । बारामा लगाइएको आलु खेतीमा रोगको प्रकोप बढेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । फल्ने बेलामा आलुको बिरुवा सुक्न थालेपछि लगाएको खर्चसमेत उठ्न नसक्ने चिन्ताले किसान पिरोलिएका हुन् । किसानहरुले रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न औषधि प्रयोग गरेका छन् । तर आलुको बिरुवा सुक्ने क्रम...